कालिञ्चोक भगवतीले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् आज २०७७ फाल्गुन १० गते सोमबारको राशिफल Canada Nepal
कालिञ्चोक भगवतीले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् आज २०७७ फाल्गुन १० गते सोमबारको राशिफल
मेष राशि – देशपरदेशको यात्राको उत्तम योग रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनिका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु समेत सम्पादित रहनेछन । बल तथा पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा भने सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बृष राशि – स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभा सम्मेलनमा सम्लग्न रहने योग रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तीहरु बाट धोका हुनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । वाणिका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्वन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिथुन राशि – स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चोट पटक आईपर्नेछ । खराब संगतका कारण सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ । आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ ।
कर्कट राशि – स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ । आकस्मीक खर्चको योगहरु बन्नेछन । सामान्य यात्राकारकसमय रहेकोछ । मानसीक तनाबका कारणले गर्दा कार्य क्षेत्रमा झन्झट आई पर्न सक्नेछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।
सिंह राशि – दिदी बहिनीहरुको साथ सहयोगले दीगो फाईदा हुने कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउला । यात्राका कारण सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ ।
कन्या राशि – बिद्यार्थी बर्गको बौधिक बिकाशका निम्ति समय राम्रो रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ । श्रम र मेहेनतको राम्रो कदर हुनेछ तथा मानसम्मान प्राप्त हुने समय रहेको छ । सामाजिक कार्यमा आफुअग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरुलाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनसक्नेछ ।
तुला राशि – अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ । अरुको छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ ।
फाल्गुण १०, २०७७ सोमवार ०७:१४:१४ बजे : प्रकाशित